ဘယ်လို နည်းပြမျိုး ဖြစ်လိုသလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟ လိုက်တဲ့ ဝိန်း ရွန်းနီဖာဂူဆန် ?? ဗန်ဂါးလ် ?? မော်ရင်ဟို ?? - SPORTS MYANMAR
ဘယ်လို နည်းပြမျိုး ဖြစ်လိုသလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟ လိုက်တဲ့ ဝိန်း ရွန်းနီဖာဂူဆန် ?? ဗန်ဂါးလ် ?? မော်ရင်ဟို ??
လက်ရှိ ဒါဘီ ကောင်တီ အသင်း မှာ ကစား နေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း ဖြစ်သူ ဝိန်း ရွန်းနီ ဟာ ကစားသမား – နည်းပြ တာဝန် နှစ်ခု ကို ယူဆောင် ထားတဲ့ အတွက် အနာဂတ် မှာ ဘောလုံး နည်းပြ လုပ်မယ် ဆိုတာ သေချာ နေပါတယ် ။
ဒီအတွက် နည်းပြ တစ်ဦး ဖြစ်လိုတယ် ဆိုရင် ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ အသင်း ကို ကိုင်တွယ် တဲ့ နည်းပြမျိုး ဖြစ်လို သလဲ ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အချက် တစ်ခု ပါပဲ ။ အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ ဝိန်း ရွန်းနီ ဟာ ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘဝ 13 နှစ်တာ ကာလ အတွင်း နာမည်ကျော် နည်းပြ တွေနဲ့ အလုပ်တွေ အတူ လက်တွဲ လုပ်ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် ရွန်းနီ ဟာ ဖာဂူဆန် ၊ ဒေးဗစ် မိုယက်စ် ၊ ရိုင်ယန်ဂစ် ၊ လူးဝစ် ဗန်ဂါးလ် ၊ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို အပြင် အင်္ဂလန် ရဲ့ နည်းပြ ဟောင်းတွေ တစ်ဦးချင်း ဆီက ကောင်းကွက် ၊ ဆိုးကွက် တွေကို အတော် များများ လေ့လာ မှတ်သား ထားခွင့် ပိုင်ဆိုင် ရရှိ ထားခဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် သူဟာ အဲဗာတန် အသင်း ၊ DC ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ ဒါဘီ ကောင်တီ တို့လို မတူညီတဲ့ အသင်း တွေ ၊ လိဂ် တွေမှာ လည်း အတွေ့အကြုံ ကောင်း တွေကို ရှာဖွေ ထားနိုင် ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် နည်းပြ လောက ထဲကို ဝင်ရောက် ရတဲ့ အခါ ဝိန်းဟာ သင်ယူ ထားတဲ့ ပညာ တွေကို အသုံးချခွင့် ရရှိ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုတော့ နည်းပြ လောက ထဲကို ဝင်ရောက်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လို နည်းပြ မျိုး ဖြစ်လို သလဲ လို့ အမေး ခွလိုက် ရတဲ့ အခါ မှာတော့ ရွန်းနီ က လူးဝစ် ဗန်ဟားလ် လို ပွဲစဉ် တွေကို ကြိုတင် ပြင်ဆင် တက်သူ ၊ ဆာ အဲလက်စ် ဖာဂူဆန် လို ကစားသမား တွေကို ကိုင်တွယ် နည်းပြ တက်သူ ၊ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို အလျော့ မပေးပဲ တိုက်ပွဲ ဝင်လိုစိတ် အပြည့် ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်လိုကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” နည်းပြကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်လိုတယ် ဆိုရင်တော့ လူးဝစ် ဗန်ဟားလ် လို ပွဲစဉ် တွေကို ကြိုတင် ပြင်ဆင် တက်ဖို့ ၊ ဖာဂီ လို ကစားသမား တွေကို စီမံ ခန့်ခွဲ တက်ဖို့ ၊ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို လို အလျော့ မပေးပဲ တိုက်ပွဲဝင် လိုစိတ် ၊ ဆာလောင်မှု အမြဲ ရှိဖို့ လိုအပ်တယ် လို့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ”
” ဆမ် အလာဒွိုက်စ် ကတော့ သူ ဘာတွေ လိုချင် သလဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိ ပါတယ် ။ ခင်ဗျား ဟာ အသင်း တစ်သင်း ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိ သလောက် ပဲ လမ်းညွှန် ပေးနိုင် မှာပါ ။ ဆမ်က အဲ့တာ ကို အမြဲ လုပ်ခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ဆီ ကို သွားရောက် ရပြီ ဆိုတာ နဲ့ ကိုယ် ကစား လိုတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ကစား ခွင့် ရရှိ လိမ့်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် သိနေ ခဲ့ရ ပါတယ် ” လို့ ရွန်းနီ က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ရွန်းနီ ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘဝ တစ်လျောက် ဆာ အဲလက်စ် ဖာဂူဆန် နဲ့ အတူ အများဆုံး လက်တွဲ ခဲ့ ရပြီး ဆု ဖလား အောင်မြင်မှု တွေကို များစွာ ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အခုတော့ သူဟာ နည်းပြ ဟောင်းရဲ့ အရည်အသွေး တွေကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူး သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ဆာ အဲလက်စ် က တစ်ကယ့် ကို အံ့ဖွယ် နည်းပြ တစ်ဦး ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံ က ရှုပ်ထွေးမှု သိပ် မရှိ ပါဘူး ။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အချက် က လူတွေ အပေါ် ယုံကြည်မှု ပေးခြင်း ပါပဲ ။ သူဟာ သူ့ရဲ့ နည်းပြ အဖွဲဝင် တွေ အပေါ် ယုံကြည်မှု အမြဲ ရှိနေခဲ့ သလို ကစားသမား တွေ အပေါ် လည်း ယုံကြည်မှု တွေ အများကြီး ပေးခဲ့ ပါတယ် ”
” သူဟာ အသင်း ရဲ့ ကစားသမား တွေကို ဘယ်လို team talk ပြောကြား သလဲ ဆိုတာ လူတွေ အမြဲလို သုံးသပ် တက်ကြ ပါတယ် ။ သူ အမြဲ ပြောလေ့ ရှိတဲ့ စကား တစ်ခွန်း က ‘ မင်းတို့ 11 ယောက်ဟာ သူတို့ တွေထက် ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ သူတွေ ချည်းပဲ ။ သွား ၊ အနိုင် ယူပြ လိုက်တော့ ‘ ဆိုတာ ပါပဲ ” လို့ ရွန်းနီ က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဂွာဒီယိုလာ ၊ ကလော့ပ် တို့ကို လိုက်ဖို့ တန်ဟတ် အချိန် ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာ ပြောဆိုသတိပေးလိုက်တဲ့ ကာရေဂါ
ယနေ့ညမှာတော့ အီတလီ ကလပ် ရိုးမား နဲ့ နယ်သာလန် ကလပ် ဖီယင်နော့ တို့ဟာ ပရိတ်သတ် ၂ သောင်းဆန့် Air Albania Stadium မှာ Europa Conference Legue ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ ပထမဦးဆုံး ချန်ပီယံ ဖြစ်လာဖို့ အားခဲနေကြမှာပါ။ ဂျိုဆေးမော်ရင်ညိုဟာ …
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ လာမယ့် ရာသီမှာ ဆလီဘာကို ပထမ အသင်းကြီးရဲ့ အဓိက ကစားသမား အဖြစ် နေရာ ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကတိ ပေးထားပြီး စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ပါ ပြင်ဆင် နေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ် ။ ဆလီဘာ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက မာဆေးလ် အသင်းမှာ အငှားသွားကစားခဲ့ကာ …